I-COTTON MILL-by Fields of Cotton, LLC - I-Airbnb
I-COTTON MILL-by Fields of Cotton, LLC
Indlwana Yesivakashi Esegumbini lokulala eli-1 enhliziyweni ye-Colorado City, Tx. Okusanda kubuyekezwa futhi kufakwe kahle ngefenisha yekhwalithi. namalineni okunethezeka nemicamelo. Ikhishi elikhulu elineSiqandisi esigcwele usayizi kanye neSit-Up Island, kanye neGumbi Lokulala elikhulu elinefenisha enhle ne-KING BED, amakhabethe amakhulu ama-2, i-TV enkulu, nesibani esiseceleni kombhede esinembobo ye-USB kanye nepulaki yamaselula nama-pads akho. I-Cotton Mill inendawo evalekile, indawo yegceke yangasese, kanye nezindawo zokuwasha ezabelwana ngazo ne-The Cotton Gin.
AKUKHO Izilwane ezifuywayo ngaphandle uma zigunyazwe kusengaphambili futhi ecaleni necala. Inkokhelo yesilwane esifuywayo engabuyi engu-$50 izosebenza kuleli cala.
Sinaye usonkontileka otholakalayo ukuze alungiswe izimo eziphuthumayo.